Shinoa 200ml Fivarotana boribory mafana vongana Glass mazava diffuser Bottle orinasa sy ny mpamatsy | Hoyer
200ml mafana varotra boribory mivarotra tavoahangy diffuseur tavoahangy
Toeram-pandrosoana, mazava sy manintona, azo ampiasaina amin'ny fametrahana amin'ny toerana maro, toy ny trano, birao, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fisasana, efitrano fampisehoana, sns.
Volume: 200ml / 6,7 oz
Weight: 200g / 0.44 pounds
Haavo: 100mm / 3.84 santimetatra
savaivony: 67mm / 2.64 santimetatra
Color: mazava, pirinty na loko namboarina azo ekena ihany koa
MOQ: 10,000pcs, kely ny habeny dia azo ekena ihany koa raha manana tahiry isika
Ny tavoahangy dia ampiasaina indrindra amin'ny fanoloana Diy miaraka amina hazo volotara, na menaka manan-danja sy manitra. Tena mora ny mampiasa setus diffuser, mila mandatsaka ny menaka ao anaty tavoahangy ianao, ary avy eo mametraka kitay volotara ao anatiny dia ho lasa rivotra ny fofona, mba hahazoanao rivotra mahafinaritra.
Fanamarihana: Tsy tafiditra ny hazo volotara, menaka, ampidiro na lids, raha toa ianao ka mila fitaovana mifandraika mifandraika amin'izany, tsidiho azafady ny tranokalanay na mandefa famotopotorana aminay mivantana. Misaotra anao.
Soso-kevitra: Vokatra ny vokatra matevina. Mba asio fepetra am-pitandremana ka ampidiro ao amin'ny toerana azo antoka izy ireo mba hisorohana ny tsy hitatra na handratra. Tazano ny ankizy latsaky ny 3 taona hiala na milalao eo ambany fanaraha-mason'ny olon-dehibe.
Size Boky: 200 ml Weight: 200g Haavony: 100 mm Haavo: 67 mm Boky: 6,7 oz lanja: 0,44 kilao Haavony: 3.84 santimetatra Diameter: 2.64 santimetatra
Color mazava ny fanontana na ny loko namboarina dia azo ekena ihany koa
MOQ 10,000pcs Tsy ampy ny habetsahana ekena koa raha manana tahiry isika
Sample a. santionany amin'ny tahiry:QTY: 1–5pcsVidiny: nomena malalaka
Previous: 250ml kalitao mazava tsara sy tavoahangy différer glass Amber
Manaraka: 2 oz Round Amber Kosmetika Jar
Tebolan'ny fantsom-bazaha tavoahangy 240ml manokana miaraka amin'ny ...
Fahazavana malaza 100ml mazava Square Square diffuser Bottl ...
250 ml avo kalitao mazava sy amber Glass diffus ...
Fametahana volotara mainty vita amin'ny mainty ho an'ny diffuser ...
Tavoahangy tavoahangy fihodinana feno karazana